Ogaden News Agency (ONA) – laba muwaadin oo lagu dilay Galaalshe iyo Xaalada Cabdi UBO oo mugdi ku jirta
laba muwaadin oo lagu dilay Galaalshe iyo Xaalada Cabdi UBO oo mugdi ku jirta
08/09/2012 Meel ka tirsan deegaanka Doolaado oo Galaalshe u dhow ayaa waxaa lagu dilay laba muwaadin ahna daadkii deegaankaas. Labada muwaadin ayaa magacyadooda lanoogu soo sheegay
Bashiir sheekh Maxmaed Macalin iyo Siyaad Sugulle.
Cabdi UBO oo sirdoonka TPLF la baxeen Maxaa ka jira:
Dhinaca kale waxaa magaalada Jig Jiga soo gaadhay horjoogaha Ciidamada amniga ee Gumeysiga Ethiopia iyo ciidamo cusub oo aad u tiro badan oo ka yimid dhinacaas iyo Addis Ababa.
Waxaa warar aan wali si rasmi ah usoo baxin lagu sheegaya in ciidamadan loo keenay inay xidh xidhaan masuliyiinti u qabilsana gumeysiga Abbysinia dhulkaas Ogadeniya gumaadka Shacabka. Waxaa kale oo la sheegay in ciidamadan ay hubka ka dhigayaan Liyuu Poliska.
Wali lama cadeyn karo wararkan balse waxaa la xaqiijinaya in Cabdi UBO ay Ciidamadan Cusub ka kaxeysteen xafiiskiisa oo ay ku riteen gaadhi qufulan. Cabdi UBO ayaa ku jira mudo 9 saacadood kabadan goob aan lagala xidhiidhi karin dhinacaas iyo Addis Ababa.
Maamulka Cusub ee qabsaday taliska Ethiopia ayaa qorsheynaya ciddii ay qoorta usudhi lahaayeen danbiyadii uu Zenawi ka geystay gudaha Ogadeniya. Iyaga oo raba inay wadamada ree galbeedka iska dhaadhiciyaan una sheegaan inay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan arrimaha xuquuql insaanka cidii falal danbi wadayna ay sharciga marin doonaan.
Maamulka Cusub ee talada kala wareegay kaligi taliye Zenawi kolku dhintay kadib ayaan laga filayn in wax isbadal saas ah oo ka gadisan xasuuqi uu Zenawi ka gaystay Ogadeniya. Balse waxaa suurto gal ah inay abuuraan kooxo cusub oo amarkooda fuliya.
Siyaasiyiinta la socda xaalada Ogadeniya oo faaloyin ka bixinayay wadahadalka ONLF iyo Ethiopia ayaa sheegay in wadahadlkaas khatar gali karo hadii xasuuqa baahsan ee kasocda Ogadeniya sii socdo maadama Ururka ONLF uu taageradisu ku dhisantahay shacabka. Shacabkuna uusan raali ka aheyn in Ethiopia lala hadlo inta ay xasuuqa ka wadaan Ogadeniya.
Waxii kasoo kordha arrimahan oo xaqiiqdooda ONA baadi goob ugu jirto kala Soco ONA.
odeyga beesha says:
ina ilay halkuu ku danbeyn..Dadku xasuuqay miyuu dhex socon doona mise wuu isdal-dali. Kolay iyo kolayba waa ki taga kase lagu badalaaa
Caqli Gaabana ma diggaagba! Xoolaha ayaaba garta gurigooda kuwan maxay ahaayen..
xagla wayne ara giisaad aragta inuu yahay xoolo la soo kiraystay laakiin waa inuu xabaal aabihii milizanwi ka agsamaystaa